Magaalada Hargeysa oo lagu gubay Jaad farabadan - Awdinle Online
Magaalada Hargeysa oo lagu gubay Jaad farabadan
April 27, 2020 (Awdinle Online) –Gudiga ka hortaga Cudurka Covid-19 u qaabilsan Soomaaliland iyo Ciidamada Booliska Gobolka Maroodi-Jeex ayaa fagaare ku yaalla Magaalada Hargeysa waxaa ay ku gubeen jaad farabadan.
Shalay Gelinkii hore ayaa jaadka oo ka kooban 200 oo Kiilo oo jaadka dheer dheer ah iyo 100 Marduuf,waxaa ay kasoo qabteen Magaalada Bakigubadle,kaas oo laga keenay dhinaca Itoobiya.
Goobta jaadka lagu gubayay ayaa waxaa ku sugnaa Saraaki ka tirsan Ciidamada Booliska Gobolka Maroodi-Jeex iyo Xubno kamid ah Guddiga ka hortagga Cudurka COVID-19 iyo dadweyne daawanayay.
Saraakiisha Ciidamada Booliska ayaa waxaa ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in jaad la soo geliyo deegannada Soomaaliland,iyaga oo digniin u diray Ganacsatada sida qarsoodiga ah jaadka ku keenay.
Tallaabada Maanta Soomaaliland ay ku gubtay jaadka ayaa waxaa ay daba socotay Go’aan kasoo baxay Guddiga ka hortagga Cudurka Coronavirus kaas oo lagu mamnuucay in muddo 25 Maalmood jaad la soo geliyo deegaannada Soomaaliland.
Previous articleIsrael ‘oo sugeysa’ ogolaanshaha Mareykanka si ay uqaadato daanta Galbeed.
Next articleXog: Shaqo joojin lugu sameeyay Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Dalka.